घरेलु मदिरालाई किन निरुत्साहित : प्रदेश सांसद राई – Himal FM 90.2 MHz
घरेलु मदिरालाई किन निरुत्साहित : प्रदेश सांसद राई
बिचार – बिमर्श adminhimal March 21, 2020
सोलुखुम्बु, चैत्र ८
गत विहिबार खोटाङका होटलमा विक्रिका राखिएका घरेलु मदिरा बरामद गरि नष्ट गरिएको घटनामा सांसदले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । यहि विषयमा प्रदेश नं १ का सांसद उषाकला राईसंग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
घरेलु मदिरा नष्ट गर्दा किन आपत्ति ?
यो ठूलो जघन्य अपराध हो भन्ने लिन्छु । किनभने, मदिरा भनेर हाम्रा आमा दिदीवहिनीहरुले गाउँघरमा आफैले बनाएको कोदोको लोकल रक्सी घ्याम्पाका घ्याम्पा फोर्ने, रक्सी माटोमा पोखेर बहादुरी देखाउने । राज्य, पुलिस प्रशासनले पनि बहादुरी हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने, अनि करोडौँ करोडको विदेशी ब्राण्डका रक्सी, हुस्की र वियर नेपालमा भित्राउने अनि नेपालीहरुले खाने र उत्सव मनाउने । करोडौ नेपाली रकम विदेश जाने, करोडौंका पुँजीपतिहरुको उत्पादन नेपालमा भित्राउने र स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि आफूलाई मार्न आफैँले कानुन बनाउने । त्यसपछि यो कुरालाई ठूलो काम ग¥यौ है भनेर बहादुरपन देखाउने ? यो औचित्यपुर्ण छ त ।
तपाई प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ, के तपाईले कानुन संशोधनका लागि आवाज पनि उठाउनु हुन्छ ?
हो, मैले यसको लागि विधेक तयार गर्दैछु । अव, चाँडै म संसदमा लगेर दर्ता गर्ने योजनामा छु ।
तपाईले घरेलु मदिरा नष्ट गरेर जनजातीको संस्कार र परम्परामाथी धावा बोल्न खोजियो, भन्न खोज्नुभएको हो ?
हिजोको राज्य सामन्तवादी थियो, पुजीँवादी थियो, अव त हुनु भएन नि त । अव त सरकार हाम्रो हातमा छ । अहिले लाइसन्स दिएर बनाउन दिने भन्ने निती छ । लाईसन्स क–कस्ले प्राप्त गरे त ? हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरुलाई त लाइसन्स दिइएको छैन् । लाइसन्स पाउने भनेको उही पुँजीपतीहरुलाई नै त दिने हो, धनि र पहुँचवालाहरुलाई दिने हो, तर गरिबलाई त हैन, गाउँघरमा गरिब आमा दिदिबहिनीहरु छन् । त्यसैले त उनीहरु एक सयमा, एक बोतल रक्सी बेचिरहेका छन् । यति सस्तो, अमुल्य र औषधियुक्त रक्सी बेच्दैछन् नि त । अनि, घरेलु मदिरा पोखेर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन त दिनुभएन नी ?